Nha nha, Antimicrobial Nha nha, Nha nha nha - Enyuan
Sharpened achara unyi ezé
oem soft bristles obere ahịhịa isi nha eze
Di na nwunye filament adụ bristles brọsh
iri puku ntutu ntutu bu softly designe ...
High polima tpu bristles ntacha eze echebe t ...
Huai'an Enyuan Tourist Products Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta na nhazi nke ngwaahịa ntanye eze, ọkachasị gụnyere usoro ntanye eze na ọtụtụ narị ngwaahịa ndị ọzọ. Isi ngwaahịa: brọsh ịsa ahịhịa, ezé ezé, adịgboroja ire, brushes interdental, achara ezé, wdg. Plantlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ ruru ihe karịrị mita 4,000. E nwere ihe karịrị ndị ọrụ 80.
Ihe dị iche n’agbata bristles siri ike na nke dị nro nke isi eze
E jiri ya tụnyere brọsh ịsa ezé, brọsh e ji asa ezé adịghị emerụ ezé ahụ́ ma nwee ihu ọma nke ọtụtụ ndị na-azụ ya. Ka anyị lerukwuo anya n’ihe dị iche na ncha ezé na nke siri ike, na otu esi eji brọsh ịsa ezé. Kedu ihe dị iche na nro nro nro a ...
Etu esi ahọrọ brọsh ezé ụmụaka
Ọtụtụ ndị nne na nna ga-azụlite àgwà ụmụ ha nke ịsa ikikere ezé kemgbe ha bụ ụmụaka, kedu mgbe ụmụaka kwesịrị ịsa ikikere ezé nke ọma. Kedu ụdị asacha ezé m kwesịrị ịhọrọ? Kedụ ihe ị ga-eme mgbe ị na - ahọrọ ịsa ezé ụmụaka? Ka anyị kesaa taa: Otu esi ahọrọ chi ...
Otu esi ahọrọ ahịhịa ezé
Nke mbu, mgbe ị na-azụrụ iko ntanye, ị kwesịrị ị paya ntị na nhazi ọrụ zuru ezu nke ezé ezé, nke akọwapụtara na usoro atọ a. Nke mbụ, anyị kwesịrị ị attentiona ntị na ụdị imepụta nke ezé ezé, dị ka ụdị ebili mmiri, nke dabara na ọnụ ca ...
Gaa n'azụ anya!